Baayyeen Gaabbe Maammee Koo - Xalayaa Jaalalaa
“Hima didduun du’a hin didduu” jedhan. Ayiii!! Yeroo sana nattii hin fakkaanne gorsa hedduu karaa hundumaan osoo na gorsituu osoo nawaliin boossu osoo atii maraattu osoo wayaa kee baafatte gattee har’uma akka nama du’eet gadda siif taa’e. “Wa’ee kee fixadhee atii gorsa koo hin dageessu taanan” nan jettee turte. Osoo atii halkaniif guyyaa imimmaan kee dangalaastu gorsa kee irra tarkaanfadhee deemu koof gadda guddaatu nattii dagahama. “As teenye waliin hojjenna waliin hojjennes ni sooromna qarshiis akka garaa keenyatti ni arganna biyyumaa keenya keessatti”, dhiisi hin deeminii otuu atii jettuu sirra tarkaanfadhee yaada garaa kooti duuka bu’ee si dhaga’uu dhiise. Dhibba maatii koof kan hiriyoota kan isaan nan jedhan fudhadhe dhugaa se’en goyyoome.
Jaalala ho’aa waliin dhandhamachaa jirru addan kuteen biyya Arabaa deemuuf dirqamee. Yeroo sanas sijibbee osoon taane yaani namootaf qarshii argadhaan se’e yaada kootin goyyoomen. Ji’aa tokkoo keessattii waan anii sooromee dhufuu nattii fakkaate.
Gaafan achii gahuu garuu, waanan arge maalan jedhee sittii hima? Fardaaf lafa natti ta’ee! Maamme koo, biyyaa araba ka’ee torbaan osoo hin gahiin boo’ee maraachu eegale. Maammee koo, dhugaa nattii hin fakkaatiin jaalala keenya isaa akka nadhii damma miya’uu isaa akka abaabo birraa urgaa’uu addan kutee deemuun koo baayyee baayyee na gaddisiseera. Atiis garaa kee naaf kutattee nattii fakkaata. Dhugaa sitti himuu? Maammee koo, na hubattaa laata? Gurra naa dhageefattun qabda laata? Maammee koo, adaraa kee mee callisiituma taa’ii na dhageefadhu mee yeroo tokkoo. Anoo akkas hin seene dhugaa rabbiiti waanuma soorome dhufuu nattii fakkaatetu hiriyootni koo ni deemna jedhanii waan na dirqisiisaniif.
Maammee koo, garuu waan atii boosse imimmaan kee dangalaafttee na gorsitee sunii hundumtii isaa isaan ol ta’ee nattii argameera dhugaa dha baayyee ulfaata. Lubbuu koo qofaanan gara biyyatti deebi’een jira. Maamme koo osoo cidha godhanna jettee atii waan cidha keenyaaf ta’uu rakkatte qopheesitun. Gorsa kee tuffadheen sirra tarkaanfadhee deemu koof garuu gadda guddaatu nattii dhaga’ama. Kana hunda gochuu kootif baayyee gaabbeera. Siin qaanesse, ija hiriyoota kee akka atii hin ilaalin si taasise. Maamme koo sii qofa qaana’e mitii bar Aniis qaana’een jira. Kana hunduma gochuu kootif baayyeen qaana’e.
Maamme koo, amma hoo balleessa kootif baayyee gaabbeera. Atii hoo maaloo? Maamme koo, na dhiiste jaalala koo keessa keetii baastte gattee laata? Naa irraanfattee laata? Maamme koo, yaadatta isa dur Faaxe koo jettee nafaana buussu, harra garaa sana naaf hin qabaattu laata? Marartte afaan kee keessa ka’uu deebise hin argadhu? Onne kee keessa bakka hin qabuu laata?
Maamme koo, baayyeen gadda baayyeen boo’aas dhugaa sin jedha. Gaabbes waanan deebisuu hin qabuu garuu dhugumaa garaa naaf kutatta jedheen hin yaadu. Atii nama barate waan ta’eef gocha koo kan hundumaa naaf dhiifta jedheen yaada. Maamme koo, qarshiin argadhaa jedheen goyyoome. Maal naaf wayyaa laata, Anoo homattii hin hafnee Maamme qarshiis hin argannee qobee miila koo dhaaf uffanna dhaqna koo irra jiruu gara biyyatti deebi’een jira. Baayyes miidhameen jira.
Adaraa Maammee koo naaf dhiisi rabbiif jedhii anii sittii deebi’uun barbaada. Jaalalaa keenyya ishee nadhii damma akka abaabo birra urgoofttee ofittii nama waamtu sanaan yaadeen jira. Garaa kee bal’adhuu onnee kee naa banii harka kee ballisii ofittii nasimadhuu. Mammee koo sittii balleesseera. Garaa kee madeesseera. Sammuu kees miidheera. Adaraa Jaalala naaf dhiisitii nattii araarami Rabbiif jedhii. Rabbiin yoo dhiifama goote jaalata naaf dhiisii. Maammee koo, situu naaf hin beekne malee anii waan baayye dhan goyyoome. Maammee koo Adaraa naaf dhiisi natti araarami. Maamme koo dhiibba maatii koof gorsa hiriyoota koon dhaga’ee kan kee dhaga’uu didee lubbuu kootin gara biyyattii deebi’een jira siif bilbiluus nan qaana’e.
Amma immo yaada koo jijjiradheera. Gorsa kee yeroo sanaaf fudhachuuf qophii dha siwaliin hojjedhees siwaliin nan jijjiirama jedhee kutannoon qaba. Amman booda essayyu deemuuf fedhii hin qabuu. Essaas hin ilaalu. Maammee koo, gocha anii godhe kunii gaddaaf gaabbi gudda kan bara koo guutu keessa kooti hin bannee nakeessatti uumeera. Dhugaa sin jedha kanaan kessa turee kanan dabarssee namnii kamuu kan irraa baratuu dha. Baayyeen miidhame qaama kootiniis sammuu kootiniis baayye baayyeen miidhameen jira.
Maamme koo, na dhageessa laata? Tolee naaf jettaa? Gurratti nadhageessu qabda? Gorssaa kee hunda tarkaanfadhee sidhaga’uu dhiisee deemu koof dhugaa sin jedha gaabbii guddaa baayyee baayyee guddaa kan ta’ee yoom ille keessa kooti kan hin baane keessa koot uumameera. Gara biyyatti deebi’een jira.
Jaalalle kee Saudi Arabia irra kan deebite Faaxuma Abbanagaa. Jaalallee koof Mohammed Abbasaani Siigimmo Jimma kan argamuuf.
Ammas Akkuma baramee hamilee keessaniif Like nuuf cuqaasa akkasumas SHARE gochuu hin dagatinaa.
Naa’ol hojiin kankee baaaaaaaay’ee gaariidha.
Hojiin Kessan Baayee Baayee namattii tolaa Akkumma kaanan ittii fufaa……..uuuphhaaaa bakka jirtaanittii
xalaayan jaalala ati katabdee kun hedduu namatti tola galatoomii hiriyaan kees siitti haa araramuu GALATOOMI
Bayye tokko namati tola akkanumati it fufaa
gochuun dura yaaduu gariidha,think before speak